Sadism - kuyinto kwezinso kakhulu ngokomqondo ezingaba ngokuphelele ukushintsha imodeli ekuziphatheni kwabantu. It obuhlanekezela essence yayo, kancane kancane kuphenduke silo, ngubani Revels e ukuhlupheka kwabanye. Futhi uma isikhathi akusho ukumisa ukuqhubeka kwesifo, imiphumela iyoba ebuhlungu.
Nokho, njengoba sadism abasafufusa? Unya ... Akukhona yini ezivamile kubantu bonke? Ngakho kungani abhekane nalo, kuyilapho abanye uma ulingwa? Futhi kungenzeka ukwelapha umuntu onhliziyo yakhe nokubusa abafisa aphathe kabi abanye?
Lapho kukhulunywa ngaye okokuqala sadism
Esikhathini maphakathi nekhulu XVIII eFrance wayephila umbhali, isazi sefilosofi Donasen Alphonse Fransua De Sade (namuhla kungcono eyaziwa ngaphansi kwegama Marquis de Sade). Ngakho, injongo yokuphila kwakhe kwaba ekunyusweni sinenkululeko engenamingcele. Marquis wayeqiniseka ukuthi umuntu akufanele nomkhawulo ngokwawo anamahlazo zokuziphatha nezenkolo. Ngaphezu kwalokho, ngemisebenzi abalobi bathi ukuthi infliction zobuhlungu ngesikhathi bezoziphatha - lena ejwayelekile. Phela, indlela kuphela ubuntu bomuntu bangaba usuvulekile, ngomqondo ongokomfanekiso, ukuze umise kabusha zonke buso.
Ngemva kwesikhashana, lokusungula Marquis de Sade iye uzifunde ngokucophelela Sexology ubaba uRichard von Krafft-Ebing. Ngokolwazi wathola, isazi sokusebenza kwengqondo alethwe uhlobo olusha umuntu ofuna uku ku ukuhlupheka kwabanye. Futhi lo mkhuba nokugula ngengqondo wathola igama ethize - sadism (yokudumisa kwakuyophumela kube sefilosofi Marquis de Sade).
Sadism - siwukubonakaliswa ekhethekile umcabango womuntu, ukuzwakala komzimba noma ukuhlazeka ngokwengqondo kwabanye. Ngesisekelo lesi simo sibangelwa isifiso ongalawuleki ukuthola ukwaneliseka kokuziphatha ukulawula ngokuphelele isisulu sakhe. Ngokwengxenye enkulu, sadism - siwukubonakaliswa ubudlova okumsulwa, okuhloswe ngazo kuwo wonke umhlaba osizungezile.
Kuze kube manje, lo Psychology ingahlukaniswa lokhu ukuphambuka ngezigaba ezintathu ezibanzi: sadism ngokobulili futhi ezingokwengqondo autosadizm. Nakuba lezi zifo unayo eyodwa impande ezivamile, izimpawu zabo futhi ukubonakaliswa zihluke kakhulu nomunye.
Umzimba kanye sadism ngokocansi
Maye, emphakathini wethu kunabantu abajabulela kubabulali ukulimala komzimba kanye nokulimala kwabanye. Iningi baqonde ukuthi ukuziphatha okunjalo obunonya. Kodwa abakwazi ukuyeka, ngoba kungenjalo uzolahlekelwa impilo iyiphi incazelo, ngeke ibe yindawo zenjabulo.
sadism ngokobulili Ikakhulukazi ukuthi kungaba ukuzibonakalisa kubonakala ngezindlela eziningi. Ngakho, uma umuntu imidlalo ngokwanele nge ozankosi futhi isiswebhu, lona wamuva ayikwazi uwenze ngaphandle kokuzilimaza amagalelo sina kanye nezimboni. Kuyinto yokugcina libanakekele akhethekile zokuqapha ngodokotela.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi sadism okuqinile awasebenzi kuphela nabobulili obuhlukile. Lokhu kungenxa yokuthi umuntu angenakho vusa uqobo labantu ozibandakanya nabo kwezocansi futhi ubuhlungu lokho kungase kubangele sadist. Ngakho-ke, kungase babe izisulu zezinhlekelele kwabesifazane nabesilisa, futhi - yini nakakhulu - izingane.
Sadism: sokuhlushwa ukucwiya
Uma sadism ngokobulili ifinyelela umvuthwandaba wayo wokugcina, indoda ngomqondo ongokoqobo yegama elithi iphenduke silo. passion ongalawuleki ngokudala udlame lizokhuphuka yona izinto ezihlasimulisa umzimba ukuthi ngesinye kuzoholela ekulahlekeni yokuphila komuntu. Phela sadists into efana yezidakamizwa: bobabili njalo ukwandisa umthamo ukuze andise embundwini ubumnandi.
Isigaba sokugcina sale uhlobo sadism nokuhlukunyezwa ziyalimala sina. Futhi nakuba budlova kuyinto yisigwebo umthetho, anonya kakhulu kuze kube manje wanqotshwa kanjani kuleso silingo. Bese ejele ungayeka lesi silo. Kodwa, ngeshwa, ngesikhathi ukuthola umuntu obunonya ku-akhawunti yakhe yokuhlala Izinkundla zemicimbi ithilomu inani elikhulu izisulu.
sadism Zokuziphatha - siwukubonakaliswa yolaka lomuntu ngokwengqondo okuhloswe ngazo ukuhlazeka yabanye. Ngokwesibonelo, kungase kuthathe ngendlela ukuxhashazwa, ukuhlukunyezwa, namasu ezingcolile futhi izinsongo. Leli fomu obuhlanekezelwe kuhloswe imihlatshelo engokomoya, ngaleyo ndlela kokuguqula emhlabeni anguye ngaphakathi.
Ngokungafani somzimba, anonya ngokuvamile zinhle ukuzifihla ukuthi bangobani yabo. Bona ngobuqili lokuxhaphaza abantu, bezihlikihla ukuzethemba futhi adlale ngemizwa yabo. Lawo mandla angenye esandisa injabulo yabo, abenze bajabule kakhulu. Kodwa kunazo zonke yiqiniso lokuthi abantu ngokuvamile beba esiphakeme inkampani, ukuze recoup abangaphansi.
Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi sadism futhi masochism kuyahambisana. Kulokhu, umuntu kungaba kokubili umqali futhi isisulu kumuntu oyedwa. Ngokwesibonelo, abanye ngonya zijabulela yokuthi juqa bo andla, emilenzeni noma esifubeni. Njengoba kulindelekile, laba anqunyelwe sokuhlushwa silinganisela ngendlela enengqondo, uma ikhona, angabizwa ngokuthi "ocabangelayo".
Nokho lesi Ngohlelo uyohlale sadism evelele. Futhi ngakho-ke, abantu ngokuhamba kwesikhathi ungashintsha izimpi zabo zibonakale zinezinhloso kwabanye. Bese autosadizm kwelinye kweso ube ifomu okuqhubekayo udlame locansi.
Ngo-1968 wabona ukukhululwa kwe umqondisi Japanese Teruo Ishii "Shogun Sadism:. Injabulo sokuhlushwa" Uzungu tape wayengekho othakazelisayo kakhulu, kodwa ukukhishwa kusenzo ke, kwaphela nasozwaneni ngisho moviegoers abaleseka. Futhi ebuka wonke lo okwakwenzeka, Angikwazanga usizo ukucabanga, lapho enza umuntu endaweni ukoma esinjalo ubudlova?
Ake uqale nge yokuthi iningi kwezinso ngokwengqondo avela ingane isencane. Endabeni basola obunonya kungaba imfundo okungalungile. Ngokwesibonelo, uma ingane njalo babhekana nokuhlaselwa emndenini wakhe, eqala ukuba bayibheka njengelungelo isifaniso lothando. Esikhathini esizayo, umuntu onjalo ngeke bakwazi ukuhlukanisa umehluko phakathi udlame nesisa - ngaye kuzoba into efanayo.
Nokho, ngezinye izikhathi, iphuzu eliyisisekelo iyona ukuhlukumezeka ngokomqondo noma isifo. Ngokwesibonelo, uma umuntu kuyinto kakhulu phansi noma ukuthukwa Khona-ke angaqala yena ufisa ukuba bagomela ngokwabo ngendlela efanayo. Nokho, ukuziphindiselela yakhe izokwabiwa hhayi kumuntu osonile ethile futhi emhlabeni wonkana.
Akubalulekile ukukhumbuza waphinda ukuthi imiphumela sadism. Izithombe izisulu efile, ngakho ngokuvamile bakhala emakhasini izindaba amabhlogo nezihloko. Thina gcina thina yokuthi ukuthi isifo sokuphazamiseka kwengqondo kufanele kuthathwe nakanjani. Kuyini lokhu kuyiqiniso, lo kungaba nzima kakhulu.
Okuwukuphela kwendlela yokuphuma kuwumsebenzi eside nge izazi zokusebenza kwengqondo, phakathi kwesikhathi lapho umuntu kuzokusiza uqonde kwenkululeko ukuthi akufanele uhambe. Nokho, le ndlela isebenza kuphela uma isiguli ngokwakhe ufuna ukuqeda ukuthambekela kwabo obunonya. Ngoba impatho ngenye ezifana imiphumela emihle abakwazi ukuletha.
Cellulite ezinqeni: izindlela kulahlwa. Bonisa. beauty zokwelapha